News – Page6– Alinyaung
မန္တလေးမြို့သင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် အများပြည်သူ စိတ်ချမ်းမြေ့စွာ ရေကစားနိုင်ရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်
zawgyi မန္တလေးမြို့သင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် အများပြည်သူ စိတ်ချမ်းမြေ့စွာ ရေကစားနိုင်ရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက် မန္တလေး၊ ဧပြီ ၁၄ မန္တလေးမြို့သင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် အများပြည်သူ စိတ်ချမ်းမြေ့စွာ ရေကစားနိုင်ရေးအတွက် မြို့ဝင်ဂိတ်များနှင့် မြို့တွင် ပိတ်ဆို့ရှားဖွေစစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ကာ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ယမန်နေ့ (ဧပြီ ၁၃) သင်္ကြန်အကြိုနေ့ […]
ပြုတ်ကျသေဆုံးသူမှာ မိခင်နဲ့ ချစ်သူအတွက် စွန့်စားခြင်းဟု ၎င်းရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူဆို မကြာသေးခင်ကမှ သတင်းစာမျက်နှာတွေမှာ ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား လူစွန့်စားတစ်ဦးရဲ့ သေဆုံးမှုသတင်းနဲ့အတူ လူတွေရဲ့ဝေဖန်သံတွေလည်း ကျယ်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဆိုပါ သေဆုံးသူ Wu Yongning ဟာ လူမှုကွန်ယက်မှာ သူရဲ့စွန့်စားမှုတွေကြောင့် ဆယ်လီဖြစ်နေသူပါ။ သူ့ရဲ့ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ စွန့်စားမှုတွေကြောင့် နာမည်ကြီးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ […]
ရိပ်သာမှယောဂီဝတ်စုံဖြင့် ပုံတင်ခဲ့သူ ၀န်ချတောင်းပန်
ရိပ်သာမှယောဂီဝတ်စုံဖြင့် ပုံတင်ခဲ့သူ ၀န်ချတောင်းပန် ￼ ပထမတော့ တောင်းပန်စာကြောင့် Post ပြန်ဖျက်ပေး မလို့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တောင်မသိပဲ သူကအရင် Block ထာတော့ တခြားသူတွေ သင်ခန်းစာရအောင် ဒီတိုင်းပဲ ထားထားလိုက်တော့မယ်။ ရေးတင်ထားတဲ့အထဲမှာ Post ဖျက်လိုက်ပါ။ ပြန်တောင်းပန်လိုက်ပါ ဒါမှ မဟုတ်လဲ ဖုန်းမသုံးပါနဲ့လို့ […]
အမေရိကန်စစ်​တပ်​သည်​ ဆီးရီးယားနိုင်ငံမြို့ တော် ဒမတ်စကက်စ်ကို ဒုံးကျည်များဖြင့် ဧပြီ ၁၃ ရက် ညပိုင်းမှ စတင်​၍ တိုက်ခိုက်နေဘီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်​ သတင်းအသေးစိတ်ကို ထပ်မံဖော်ပြပါမည်။ Unicode Version အမရေိကနျစဈတပျသညျ ဆီးရီးယားနိုငျငံမွို့တျော ဒမတျစကကျဈကို ဒုံးကညျြမြားဖွငျ့ ဧပွီ ၁၃ ရကျ ညပိုငျးမှ […]
Zawgyi ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသင်္ချာ ပြိုင်ပွဲတွင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ခဲ့သည့်ကျောက်ပန်းတောင်းသားလေး ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသင်္ချာ ပြိုင်ပွဲတွင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ခဲ့သည့်ကျောက်ပန်းတောင်းသားလေးLike နဲ့ Share လုပ်ပြီး ချီးမြှောက်ကြရအောင်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသင်္ချာ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့Math Kangaroo 2018 ပြိုင်ပွဲကြီး၏ဆုရရှိသူများ စာရင်းထွက်ပါပြီ။ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာ သတင်းလေးတစ်ခုပြောပါမယ်။ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ မြို့မကွက်သစ်မူလွန်ကျောင်းမှကျောင်းသားလေး မောင်ကောင်းမင်းထက် (ဦးဇော်မျိုးထက် + ဒေါ်ဇွန်ပွင့်) […]
အမြန်လမ်း ၁၅ မိုင် ၂ ဖာလုံမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ ကလေးပါ ယောကျာင်္းလေးပါ စွန့်ပစ်တာလား?မိဘတွေ မသိအောင် လုပ်ခဲ့တာလား ? မနက်ဖြန် ရန်ကုန်က နီးစပ်ရာ ရဲစခန်းကနေ စပြီး စုံစမ်းမှာပါ သနားစရာ ခလေးအတွက် မိဘတွေ လက်ထဲရောက်အောင် ရှဲပေးကြပါဦး
zawgyi အမြန်လမ်း ၁၅ မိုင် ၂ ဖာလုံမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ ကလေးပါ ယောကျာင်္းလေးပါ စွန့်ပစ်တာလား?မိဘတွေ မသိအောင် လုပ်ခဲ့တာလား ? မနက်ဖြန် ရန်ကုန်က နီးစပ်ရာ ရဲစခန်းကနေ စပြီး စုံစမ်းမှာပါ သနားစရာ ခလေးအတွက် မိဘတွေ လက်ထဲရောက်အောင် ရှဲပေးကြပါဦး unicode […]
ရှေးယခင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု သင်္ကြန်ကို ပြန်လည်ပုံဖော်တဲ့ မန္တလေးသင်္ကြန်ကနေ့စပြီ
ရှေးယခင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု သင်္ကြန်ကို ပြန်လည်ပုံဖော်တဲ့ မန္တလေးသင်္ကြန်ကနေ့စပြီ မန္တလေး၊ ဧပြီ ၁၃ ရှေးယခင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု သင်္ကြန်ကို ပြန်လည်ခံစားပုံဖော်ထားသည့် မန္တလေးသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ယနေ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ သင်္ကြန်အကြိုနေ့ နံနက် ၅နာရီ ခွဲတွင် မန္တလေးမြို့တော်မဟာသင်္ကြန်မဏ္ဍပ်၌ သံဃာတော်(၁၀၈)ပါးအား ဆွမ်းလောင်းခဲ့ပြီးနောက် နံနက် ၇နာရီတွင် မန္တလေးမြို့တော်မဟာသင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့သည်။ […]
ငွေကျပ် ၁၀၇ သိန်းကို အလုပ်သမားများအား ပေးကမ်းလှူဒါန်းတဲ့ အလုပ်ရှင်သူဌေး
ကောင်းလိုက်တဲ့အလုပ်ရှင်သူဌေး သာဓုပါဗျာ ——————————- မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပခုက္ကူခရိုင် ရေစကြိုမြို့ ”လိုတရ အမွှေးတိုင်” မိသားစုမှ သင်္ကြန်ကာလ အလုပ်ပိတ်ရက် နှစ်သစ်အကြိုကုသိုလ်ဒါနအဖြစ် အလှူ ငွေကျပ် ၁၀၇ သိန်းကိုအလုပ်သမားများအား ခွဲဝေပေးကမ်းလှူဒါန်းပေးခဲ့ (11.4.2018) ကိုလေး(ရေစကြို) ========= Unicode ကောငျးလိုကျတဲ့အလုပျရှငျသူဌေး သာဓုပါဗြာ ——————————- မကှေးတိုငျးဒသေကွီး […]